စင်ပြိုင်အာဆီယံ-မြန်မာ ပူးပေါင်းဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ချုပ် “ဦးကိုနီလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှု” BURMA: Investigate murder of lawyer Ko Ni, take measures to protect human rights defenders | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeစင်ပြိုင်အာဆီယံ-မြန်မာ ပူးပေါင်းဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ချုပ် “ဦးကိုနီလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှု” BURMA: Investigate murder of lawyer Ko Ni, take measures to protect human rights defenders
စင်ပြိုင်အာဆီယံ-မြန်မာ ပူးပေါင်းဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ချုပ် “ဦးကိုနီလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှု” BURMA: Investigate murder of lawyer Ko Ni, take measures to protect human rights defenders
ဦးကိုနီလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှုအား မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့လျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကြီးမားသည့် လူသားလုံခြုံရေးအရ အကျိူး သက်ရောက်မှုများဖြစ်နိုင်သည်။ ဤရာဇ၀တ်မှုမှ ဥပမာပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည့် စိုးရိမ်စရာ ကောင်းသော လမ်းကြောင်းသို့ ပြန်မရောက်သွားအောင် မြန်မာအစိုးရမှ လုပ်ဆောင်ရန် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းမှ အဆောတလျင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားကြရမည်။ (စင်ပြိုင်အာဆီယံ-မြန်မာ ပူးပေါင်းဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Debbie Stothard)
“Ko Ni’s assassination, if unaddressed, will have serious impacts on human security in Burma. The international community must act now to ensure the Burmese Government reverses the alarming trend exemplified by this crime ,” said ALTSEAN-Burma Coordinator and FIDH Secretary-General Debbie Stothard.
The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (the Observatory) was created in 1997 by FIDH and the World Organisation Against Torture (OMCT). The objective of this programme is to prevent or remedy situations of repression against human rights defenders. FIDH and OMCT are both members of ProtectDefenders.eu, the European Union Human Rights Defenders Mechanism implemented
← ဦးကိုနီ အသတ်ခံရမှု Harvard တက္ကသိုလ်ပူးတွဲကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
Slain Myanmar lawyer’s family considers himafallen hero ဦးကိုနီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှု အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နှုတ်ဆိတ်နေ →